ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: January 2010
ကမ္ဘာ.အချမ်းသာဆုံးတိရိစ္ဆာန်များ....
သတ္တ၀ါတွေဟာ ကံ၊ ကံ၏အကျိူးပေးအတိုင်းပဲရှိနေကြရတယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ အ
ခုဆောင်းပါးဖတ်ပြီးတော့ မှပဲ ပိုပြီးတော့ သိသာထင်ရှားလာ၊ သဘောပေါက်လာရ
အကုသိုလ်ကံကြောင့်အဟိတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေရပေမယ့်ကံအကြောင်းတရားက ဖေး
မခဲ့ လေတော့နေဖို့ စားဖို့ မပူရရုံတင်မက၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ချမ်းသာမှုကပါ ပြောမယုံ
ကြုံဖူးမှ သိကြမယ် ဆိုသလိုပါပဲ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို အံ့ မခန်းချမ်းသာကြပါ
အဲဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကို ငွေတွေ ပေးထားခဲ့ ( သူတို့ နာမည်နဲ့ ဘဏ်မှာအပ်ထားခဲ့ တာ
ပေါ့ လေ...) တဲ့ လူချမ်းသာတွေကိုလည်း အံ့ သြမိပါရဲ့ ....
သူတို့ သေဆုံးသွားပြီးနောက် သူတို့ ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုဘာမှ မသိနားမ
လည်တဲ့ တိရိစ္ဆာတွေနာမည်နဲ့ ဘဏ်တွေမှာ အပ်နှံခဲ့ မယ့် အစား တစ်ခြားအကျိူး
ရှိမဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှူခဲ့ ယင် ပိုပြီးတော့ အကျိူးမရှိ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထားခဲ့ တဲ့ သူတွေကထားခဲ့ တော့ လဲ ထိုတိရိစ္ဆာန်တွေကတော့ အ
ချောင် သူဌေးတွေဖြစ်နေကြရတာကတော့သာမာန်လူတွေအတွက်ကတော့ အား
£224m dog tops pet rich list ...တိရိစ္ဆာန်တွေ အားလုံးထဲမှာ အချမ်းသာဆုံးကတော့ ခွေးပါတဲ့ 
ဘ၀ အကျိူးပေးက ကောင်းခဲ့ လေတော့....
မျိူးနဲ့ ရိုးနဲ့ ချမ်းသာတယ်ဆိုပဲ...
HERE'Sadog who's far from paw - Alsatian Gunther is worth 224million.
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးခွေးကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်း ပေါင်စတာလင် ၂၂၄ သန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၃၆၁ သန်း ) ဖြစ်ပြီး သူဟာ ပေါင်စတာလင် ၅၃ သန်း
( ဒေါ်လာ ၈၅သန်း ) ကြွယ်ဝတဲ့ချင်ပန်ဇီမျောက်ဝံ ကာလူးနဲ့ပေါင် သန်း ၃၀
( ဒေါ်လာ ၄၈ သန်း ) ကြွယ်ဝတဲ့ ခွေးကလေး တိုဘီ တို့ ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ထိပ်
နာမည်ကျော် ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ခွေးတွေဟာ အာဖရိကနွယ်ဖွား အမေရိကန်မှ နာ
မည်ကျော်ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ လူမည်းအမျီူးသမီး အော်ပရာဝင်းဖရေး နဲ့ 
အမေရိကန် Frasierရုပ်သံဇတ်လမ်းများမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ တဲ့ ခွေး ဇတ်လိုက်
အက်ဒီ တို့ ပါဝင်ပါတယ်...
ဘဏ်ထဲမှာ ပေါင်စတာလင်ငွေ လေးသိန်း ( ဒေါ်လာ ၆.၄ သိန်း ) ကြွယ်ဝချမ်းသာ
တဲ့ကြောင်Zeus လည်း တိရိစ္ဆာန်သူကြွယ်စာရင်းထဲမှာ ပါသေးသပေါ့ ...
လန်ဒန်မြို့ မှာပဲ နေထိုင်တဲ့Csoki အမည်ရှိတဲ့ ကြက်တူရွေးကတော့ ပေါင်စတာလင်
ငါးသောင်း( ဒေါ်လာ ၈ သောင်း ) ချမ်းသာတယ် ဆိုပဲ...
အဆိုပါ တိရိစ္ဆာ သူကြွယ်များ စာရင်းကို လန်ဒန်မြို့ ရဲ့ တိရိစ္ဆာများ အာမခံကုမ္ပဏီ Petplan ကထုတ်ပြန်ခဲ့ တာမို့အမှန်တစ်ကယ်ချမ်းသာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်....
The lucky mutt topsanew animal rich list, beating Kalu the 53m chimp and Toby the 30m poodle.
Famous pooches making the list include Oprah Winfrey's dogs and Eddie the TV dog from US series Frasier.
It also features fat cats like Zeus who has 400k in the bank.
Andaparrot called Csoki who lives inaLondon mansion with 50,000.
Check out the full rich list below, as compiled by pet insurance firm PetPlan.
1. Gunther IV the dog - 224.6million
ဒေါ်လာ ၃၆၁ သန်း ချမ်းသာတဲ့Gunther IV အမည်ရှိခွေးသူကြွယ်...
သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငွေကြေး ဒေါ်လာ ၃၆၁ သန်းနဲ့ ဆိုယင် ခွေးသူဌေး Gunter တစ်ကောင်
သူ့ စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အရိုးတွေ ဘယ်နှစ်ချောင်းများဝယ် ကိုက်နိုင်မလည်း
ဆိုတာ ရေတွက်လို့ တောင်မရနိုင်ပါဘူး....
ဒီခွေးဟာ အဆိုတော်မက်ဒေါနား ယခင်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ဖူးတဲ့မီယာမီအိမ်တော်ကိုလည်းပိုင်
ပြီးတော့ သူလိုသမျှ အနားကနေ စိတ်ကြိုက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ဘတ်တလာ အစေခံ
ပါဝင်တဲ့ တိုက်ကြီးတစ်လုံးလည်း ဘဟားမား ( ဘားမားမဟုတ်ဘူးနော်...) မှာရှိသေး
ဒီခွေးနေ့ စဉ်စားသုံးတာကတော့ ဈေးအကြီးဆုံး caviar ငါးဥနဲ့အကောင်းစား အမဲသား
အင်း ခွေးကောင်းစားတာ လူတောင် ဘယ်လိုမှလိုက်လို့ မမှီအောင်ပါပဲလားဗျာ....
Just think how many bones Gunther IV could buy with the 224million he inherited from his dad's super rich owner.
He owns several homes including Madonna's former Miami mansion. He also hasavilla in the Bahamas complete with butler.
And you can forget Pedigree Chum - Gunther IV dines daily on caviar and steak.
2. Kalu the chimpanzee - 53million
သန်းကြွယ်သူဌေး ချင်ပန်ဇီမျောက်ဝံ ကာလူး...
မျောက်ဝံကာလူးဟာ ယခုတော့ အာဖရိက ရဲ့ Cape Town မြို့ မှာ နေပါတယ်...
သူအခုလိုချမ်းသာလာရတာကတော့ သူ့ ရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော်ရေကူးသမား
Frank O'Neill နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ Patricia တို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲအပြီးမှာ အမွေအဖြစ်ဆက်ခံ
သူကတော့ ဘယ်သူနဲ့ လိုက်နေတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူး...
Kalu now resides in his Cape Town estate in Africa.
He inherited his millions after the divorce of famous swimmer Frank O'Neill and wife Patricia.
3. Toby Rimes the dog - 30million (US 48 million )
ဒေါ်လာ ၄၈သန်း ချမ်းသာတဲ့ ခွေး တိုဘီရိုင်းမ်စ်
Ella Wendel ဟာ သူမရဲ့ အမွေးစုတ်ဖွားခွေးကလေး တိုဘီကို ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း
(ပေါင် ၁၅ သန်း ) ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှာ ထားခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီကတည်းက ခွေးတွေမျိူးရိုးစဉ်ဆက်ချမ်းသာလာလိုက်တာ အခုလက်ရှိ တိုဘီ လက်
ထကမှာတော့ ဒေါ်လာ ( ၄၈ သန်း ) ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ ....
အိမ်ခြံမြေဈေးတွေတက်လို့ ၊ ဘဏ်အာမခံ အတိုးနှုံးတွေကြောင့် ပိုများလာတာဖြစ်မယ်
Ella Wendel originally left her pet poodle Toby 15million in 1931.
Since then there have beenasuccession of pampered pooches, with the current heir being Toby Rimes.
4. Oprah Winfrey's dogs - 30million
ပေါင်စတာလင် ၃၀ သန်း ( ဒေါ်လာ ၄၈ သန်းကျော် ) ချမ်းသာတဲ့ အောပရာ ရဲ့ ခွေး...
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ရုပ်သံအစီအစဉ်ကြေငြာသူ အော်ပရာဝင်းဖရေးဟာ
တိရိစ္ဆာ္နန်တွေကို ချစ်တဲ့ နေရာမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားပါတယ်...
ဒါကြောင့် သူမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကို သူမရဲ့ အချစ်တော်ခွေးတွေကပဲ ရရှိမှာမို့အမွေ
တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၄၈ သန်း ( ပေါင်စတာလင် ၃၀ သန်း ) ပါတဲ့ ....
ခွေးတော့ မဖြစ်ချင်ကြနဲ့ နော်....
တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာ လောကကြီးကို ဖီလာဆန့် ကျင်ပြုနေတဲ့သူတဲ့ ....
အမှန်အမှား ဘာမှနားမလည်သူပေါ့ ....
US talkshow queen Oprah Winfrey is famous for her love of pets and her dogs are set to inherit 30million from their famous owner.
5. Keiko the Killer Whale - 22.6million
ပေါင်စတာလင် ၂၂ သန်း ( ဒေါ်လာ ၃၆.၄ သန်း ) ချမ်းသာတဲ့ဝေလငါးသူဌေး
Free Willy ရုပ်ရှင်ထဲက ဝေလငါးသရုပ်ဆောင် Keiko ကလည်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်
လုပ်တဲ့ အတွက် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၃၆ သန်း ချမ်းသာပါသတဲ့ ...
သူ့ ကို အပန်းဖြေ ဥယျာဉ်တစ်ခုမှာ စတွေ့ ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးထုတ်လုပ်သူ တွေက
ရွေးချယ်ခဲ့ လို့ မထင်မရှားဘ၀ ကနေ ချမ်းသာလာတာပါ...
သူတို့ ဆီမှာကလည်း ပေါက်ပြီဟေ့ ၊ နာမည်ကြီးပြီဟေ့ ဆိုယင် တစ်သက် စားရော့ ပဲ...
ဒါကြောင့် မို့ လည်း တစ်ချိူ့ နာမည်ကြီးရယင်ပြီးစတမ်းဆိုပြီး ထင်တာတွေလျှောက်လုပ်
Free Willy star Keiko made 22million from the films.
Movie bosses plucked him from obscurity for the part after spotting him atatheme park in 1992.
6. Gigoo the Hen - 10million
ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းချမ်းသာတဲ့ ကြက်မ Gigoo ( တိရိစ္ဆာန်ကြက် ပါ....)
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းသူဌေးကြီး Biles Blackwell ဟာ သူ့ ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Briony
2000 ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ တော့သူမွေးထားတဲ့ ကြက်မ Gigoo ကို အမွေ ဒေါ်လာ
၁၆ သန်း ပေးထားခဲ့ တာပါတဲ့ .....
Publishing mogul Miles Blackwell left his feathered friend 10million in 2000 following the death of his wife Briony.
7. Blackie the cat - 9million
ဒေါ်လာ ၁၄.၅ သန်း ချမ်းသာတဲ့ ကြောင် မိုးမှောင်...
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးကြောင် ဖြစ်တဲ့Blackie မိုးမှောင် ဟာလည်းသူ့ ရဲ့ အမွေတွေ
ကို သီးသီးသန့် သန့် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေလေ့ ရှိတဲ့ သခင်ဖြစ်သူ Ben Rea ထံမှ
ကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးသလည်း မဟုတ်ပဲ ငွေတွေ အစုလိုက်အပုံလိုက်ပေးခဲ့ ပါ
The richest cat in the world, Blackie inherited his money from rich recluse Ben Rea.
8. Trouble the dog - 7.2million
ဒေါ်လာ ၁၁.၆ သန်းချမ်းသာတဲ့ပြဿနာကောင် ခွေးကောင် သူဌေး
လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့Leona Hemsley တစ်ယောက်ကွယ်လွန်တော့ သူမရဲ့ မိသားစု
၀င်တွေဟာ သူမရဲ့ ခွေးဖြစ်သူက ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း ( ပေါင်စတာလင် ၇ သန်း ) အမွေ
ရမှာကို တားဆီးဖို့တရားရုံးတော်ကိုသွားရောက်လျှောက်ထားခဲ့ ကြပါတယ်...
တရားသူကြီးက ပြဿနာကောင်ခွေး (Trouble ) ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လျော့ ချပေးဖို့ 
သဘောတူခဲ့ ပေမယ့်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ ချီပြီးရခဲ့ သေးတာမို့ အခုတော့ ထို ခွေးသူဌေး ဟာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက် မြို့ မှာ နေလေရဲ့ တဲ့ ဗျာ...
သေတမ်းစာကို အလေးအနက်ထားကာ တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကိုလိုက်နာကြတဲ့ သူ
တို့ ဆီကဓလေ့ သာ ရွှေပြည်ကြီးမှာထွန်းကားယင်...
မိဘအမွေကိုမျှော်ကိုးနေတဲ့ သားသမီးတွေတော့ ...
ရွှေပြည်ကြီးမှာက မိဘသေဆုံးခဲ့ ယင် ကျန်ရစ်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေက သားသမီးတွေ
When socialite Leona Hemsley died her family went to court to stop her dog picking up 7m of her fortune.
The judge agreedareduction but he still picked up several million and now lives the life of luxury in New York.
9. Flossie the dog - 3.6million
ဒေါ်လာ ၅.၈ သန်းချမ်းသာတဲ့ ခွေး Flossie
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Drew Barrymore တစ်ယောက် သူမရဲ့ အချစ်တော်ခွေး
ကြီးကသူမအိမ်ကြီးမီးလောင်တော့ သူမ အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ လို့ကျေးဇူးတင်လွန်း
လို့သူမသေယင် သူမအိမ်ကြီးကို အဲဒီခွေးကိုပေးခဲ့ဖို့ သေတမ်းစာရေးခဲ့ တယ်ဆိုပါ
ခွေးက သူ့ အရင်သေမှာ မသိလေရော့ သလား မင်းသမီးရယ်....
Actress Drew Barrymore was so grateful to her beloved Labrador Retriever for saving her life when her house was on fire that she has pledged her house to Flossie in her will.
10-12. Frankie the dog, Ani the cat and Pepe le Pew the cat - 3million each
ဒေါ်လာ ၄.၈ သန်းစီ ချမ်းသာတဲ့ခွေး Frankie , ကြောင် Ani နဲ့Pepe le Pew
လျှိူ့ ဝှက်တဲ့ အမည်မဖေါ်လိုသူ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက သူမရဲ့ ခွေးကလေးနဲ့ ကြောင်ကလေးနှစ်
ကောင်ကို စောင့် ရှောက်ဖို့အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ Lenise Patrick ကို ပေါင်စတာလင်
ကိုးသန်း ( ဒေါ်လာ 14.5 သန်း ) ထားခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီ ကံထူးသူ တိရိစ္ဆာန်သုံးကောင်ဟာ ဆန်ဒီယေဂို မြို့ က ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းတန်အိမ်
ကြီးမှာနေပြီး တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာတစ်သိန်း ၀င်ငွေရှိတယ်ဆိုပဲ...
Lenise ကိုယ်တိုင် အဆိုပါတိုက်ဘေးကအိမ်မှာနေပြီး တိရိစ္ဆာန် သုံးကောင် အတွက်လို
လေသေးမရှိအောင် စီစဉ်ပေးနေပါတယ်တဲ့ ....
A mystery benefactor left her dog and two cats in the care of lucky neighbour Lenise Patrick with 9million.
They live happily together ina10million home in San Diego and receive an annual trust fund of 100,000.
Lenise lives next door to make sure that they have everything they need.
13-14. Hellcat and Brownie the cats - 2million each
ဒေါ်လာ သုံးသန်းကျော်ကြွယ်ဝတဲ့Hellcat နဲ့Brownie ကြောင်နှစ်ကောင်....
ဒေါက်တာဝီလီလျံဂရေယာတစ်ယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့ တော့သူ့ ရဲ့ သေတမ်းစာထဲမှာ
အချစ်တော်ကြောင်နှစ်ကောင်ကို တစ်ကောင်လျှင် ပေါင်စတာလင် ၄၁၅၀၀၀ ( ဒေါ်
လာ ခြောက်သိန်းကျော် ) ထားခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီကတည်းက ကြောင်အစဉ်အဆက်ဟာချမ်းသာလာတာ အခုလက်ရှိပေါက်နေ
တဲ့ ကြောင်တွေအထိပေါ့ ...
သူတို့ လည်း ဆန်ဒီယေဂိုမြို့ မှာနေကြပါတယ်တဲ့ ....
အတော်ချမ်းသာတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေနေကြတဲ့ မြို့ ပဲ...
မျိူးနဲ့ ရိုးနဲ့ ချမ်းသာတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေပဲဗျာ....
အကောင်တွေ အများကြီးမပေါက်အောင်တော့ အဲဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကိုထိန်းတဲ့ သူတွေ
Dr William Grier originally left his favourite felines 415,000 each in his will; their descendents of the same name still hold the majority of the estate in San Diego.
15. Moose the dog - 1.8million
ဒေါ်လာ ၂.၉ သန်း ချမ်းသာတဲ့ ခွေး အက်ဒီ
သူ့ ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သူ့ ကို အက်ဒီလို့ ပဲ ပိုသိကြတယ်.... သူ့ နာမည်အရင်းက
မော့ စ် ပါတဲ့ ...
မြန်မာပြည်က လူရွှင်တော်မော့ စ် ကိုတော့ သနားတယ်...
သူပါဝင်တဲ့Frasier ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဇတ်လမ်းဟာ အတွဲဆယ်တွဲအထိတောင်ရိုက်ခဲ့ ရ၊ လူ
သူက ကိုယ့် အားကိုယ်ကိုးပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကာချမ်းသာလာတဲ့ခွေးဖြစ်ပါတယ်....
သူ့ ရဲ့ ဇတ်လမ်းတစ်ခါရိုက်ယင်သရုပ်ဆောင်ခ က ပေါင်စတာလင် ၆၀၀၀ ရပြီး ကြေငြာ
တွေကလည်း အပိုဝင်ငွေရလို့ အခုလိုကြွယ်ဝချမ်းသာနေတာပါတဲ့ .....
Better known as Eddie to his fans, Moose has been the canine star of TV show Frasier for its ten series.
Asaself-made millionaire, Moose netted around 6,000 per episode and tops his earnings up with lucrative endorsement deals.
ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် ၊ ဟိရိသြတ္တပ္ပတရားလေးတွေစဉ်းစားချင့် ချိန်နိုင်တဲ့့ဥာဏ် ရှိနေပေလို့ သာပဲ...
Posted by Unknown | at 11:33 AM |3comments
အသက် ၁၅နှစ်နဲ့အရပ် ၆ ပေ ၁၁ လက်မ မြင့် သူကျောင်းသားလေး....
The 15-year-old schoolboy who stands 6ft 11ins in his socks... and is still growing
သူ့ ကိုတော့ ကျောင်းမှာ တောင်ဘီလူးလေး လို့ လူသိများပြီး ဆရာ၊ဆ၇ာမများနဲ့ ကျောင်းသား
ကျောင်းသူများအားလုံး သူ့ ကို မော့ ကြည့် ကြရပါတယ်...
အသက် ၁၅ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဘရက်ဒလေဖစ်ရှာ ဟာ အရပ် ၆ပေ နဲ့ ၁၁ လက်မ မြင့် ပြီး သူ
ဟာဆက်လက်ပြီး အရပ်ရှည်ကာ ထွားကြိုင်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ အငယ်ဆုံး၊ အပုဆုံး ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း ဇိုးမက်ဒါးမော့ တ် နဲ့ ယှဉ်လိုက်ယင် သူက
အရပ် ၂ ပေကျော်ပိုပြီးမြင့် ပါတယ်...သူမက ၄ပေနဲ့၆လက်မ ပဲမြင့် တယ်လေ...
သူ့ အတွက် အမေရိကားက ဆိုဒ်နံပါတ် ၁၅ ရှူးဖိနပ်ကို အထူးမှာပြီးစီးရကာ၊ အထူးပြုလုပ်ထား
တဲ့ အိပ်ယာနဲ့ မှအိပ်တဲ့ဘရက်ဒလေ ကတော့ အခုလိုထူးခြားပြီးအရပ်ရှည်နေတာကိုက သူ့ 
အတွက် ကံကောင်းတာပါပဲတဲ့ ...ဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ သူ့ အရပ်ကြီးနဲ့ ဘတ်စကက်ဘောက
အခုတော့ သူ့ ကို အင်္ဂလန်ရဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ဘတ်စကက်ဘော လက်ရွေးစင်အဖြစ်
လန်ကက်ရှိုင်းယားနယ်၊ ချောလေး အရပ်မှာနေတဲ့ ကောင်လေးက ” ကျွန်တော်က အရပ်ရှည်
တော့ ဘတ်စကက်ဘောကစားရာမှာ တစ်ပန်းသာတယ်လေ...နဂိုကလည်းဘတ်စကက်ဘော
ကစားရတာ ၀ါသနာပါတော့ အတော်ဖြစ်သွားတာပါပဲ...” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်...
အခန်းတွေကိုအ၀င်မှာ တံခါးဘောင်နဲ့ မလွတ်လို့ အမြဲပဲ ခေါင်းငုံ့ ပြီးသွားလာနေရတဲ့ကောင်
လေးက သူ့ အနေနဲ့ အခုလို အရပ်ကြီးမိုးထိုးနေလောက် သူ့ အတွက်ဂုဏ်ယူရတာ တစ်ခြား
ကျွန်တော်ကတော့ အရပ်ရှည်ရတာကိုကြိုက်တယ်...သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့် မိဘတွေ
ကတော့ အခုလိုအရပ်ရှည်တာကို ကောင်းတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်..လို့ သူကဆိုပါတယ်...
”အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့် အမေနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ အခါမှာ စင်အမြင့် ပေါ်က ပစ္စည်းတွေ
လိုချင်ယင်တော့ ကျွန်တော် ကတော်တော်အသုံးဝင်တယ်လေ...
ကျွန်တော့ အတွက် အ၀တ်အစားတွေဝယ်ယင်တော့ အကြီးဆုံးဆိုဒ်ကိုသာမှာရပါတယ်...
ဒါတောင် ကျွန်တော်နဲ့ တော်ပါ့ မလားလို့ စိတ်ပူနေရပါသေးတယ်...
ကျွန်တော်ငယ်ငယ် မူကြိုကလေးဘ၀မှာကတည်းက သူများတွေထက်ကို အရပ်ပိုရှည်
ပါတယ်...” လို့နော်တင်ဟမ် မှာကျင်းပမယ့်ဥရောပဖလားဘတ်စကက်ဘောပြိုင်
ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ ကျင့် နေတဲ့ ဘရက်ဒလေ ကပြောပြပါတယ်...
သူ့ ကိုမှီဖို့ လှေကားနဲ့ တက်ရမယ်...
လူတွေကတော့ အစကတည်းကအမြဲပြောနေကြတာပါပဲ...ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်အရပ်
ရှည်မှာပဲလို့ ....ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အရပ်ရှည်လာတာက မရပ်မနားတစ်ရှိန်ထိုးမဟုတ်ပါဘူး...
အဆင့် ဆင့် ရှည်လိုက်၊ ခဏရပ်နားလိုက်၊ ပြီးတော့ ဆက်ပြီးအရပ်ရှည်လာတာပါ...
သူဟာ ကမ္ဘာကျော် ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ထက်ကို အရပ် ငါးလက်မ
ပိုရှည်နေပါပြီ...မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်က ၆ပေ နဲ့၆ လက်မ ရှည်တယ်လေ...
ဒါပေမယ့် ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အရပ်အရှည်ဆုံး ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်ဖို့ ကတော့ သူ့ 
အနေနဲ့ နောက်ထပ် နည်းဆုံး ၈ လက်မလောက် အရပ်ရှည်ရဦးမှာပါ...
အခုအချိန်အထိ အဆိုပါစံချိန်ရှင်ကတော့အရပ် ၇ ပေ နဲ့၇ လက်မ မြင့် တဲ့ ပေါလ်စတူးဂရက်စ်
သူတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းရဲ့ ဒုတိယကျောင်းအုပ် ဘရိုင်ယန်ဆောက်တာ ကတော့ 
သူ့ ရဲ့ စာသင်သက် ၃၅ နှစ်အတွင်းမှာ ဘရက်ဒလေ ဟာ အရပ်အရှည်ဆုံးတပည့် ပါပဲလို့ ဆိုခဲ့ 
” သူဟာ ကျွန်တော်စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆောက်တ်လန်း ကျောင်းရဲ့ ရာဇ၀င်မှာတော့ အ
ရပ်အရှည်ဆုံးကျောင်းသားပါပဲ...အယင် ၁၉၇၀ ခုနှစ်လောက်များတုံးကတော့အရပ် ၆ပေ
နဲ့၇ လက်မ ရှည်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦး ရှိခဲ့ ဘူးပါသေးတယ်...”
” သူဟာခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းပြီးအရပ်ရှည်ပေမယ့် သိမ်မွေ့ နူးညံ့ ပါတယ်...အင်မတန်မှဖော်
ရွေခင်မင်ကာနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပါတယ်...ကျောင်းမှာလည်း လူသိများတယ်ပေါ့ ....ရည်မှန်း
ချက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးပါပဲ....” လို့ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကပြောခဲ့ ပါတယ်...
He’s known as the ‘gentle giant’ around school and his fellow pupils and teachers certainly look up to him.
At only 15 years of age, Bradley Fisher measures in at 6ft 11in… and he’s still growing.
He is more than two feet taller than one of his smallest schoolfriends, Zoe McDermott, who stands at 4ft 6in.
Luckily for Bradley, who has to import size 15 shoes from America and sleeps inaspecially-made bed, his size helps him play Basketball.
Posted by Unknown | at 11:02 PM |0comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံမှ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ်ရှိ မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ မရားပြုကျင့် ခံရပြီး
ကိုယ်ဝန်ရှိသွားခဲ့ ရတဲ့ အတွက် ( သူမမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ ယူဆပြီး ) ကြိမ်ဒါဏ် ၁၀၁ ချက်
အပြစ်ပေးခံရဖို့ အမိန့် ချခံခဲ့ ရပါတယ်...
အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်း ဒါဏ်ငွေပေးဆောင်စေဖို့ အမိန့် ချခဲ့ပြီး အကယ်
၍ ဒါဏ်ငွေမပေးဆောင်ခဲ့ ပါက ၎င်းတို့ နေထိုင်သောရွာမှ နေ၍ အဆက်အဆံ၊အပေါင်းအ
သင်းမလုပ်ပဲ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြဉ်ခံရလိမ့် မည်ဟု သတိပေးခြင်းခံခဲ့ ရပါတယ်...
လူ့ အခွင့် အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများရဲ့ အဆိုအရ အဓမ္မကျင့် ခံရတဲ့ မိန်းကလေးဟာပြု
ကျင့် ခံရပြီး နောက် အလျင်အမြန်ပင် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ သော်လည်း ရသတ္တပါတ်အနည်းငယ်
အကြာ ဆေးစစ်ခဲ့ ပြီးနောက် သူမမှာ ကိုယ်ဝန်ှရှိနေခဲ့ တာ သိခဲ့ ရလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ လည်း
သူမကို လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ် ဧပြီလက ဗြဟ္မန်ဘာရိယား ဒေသမှာ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ရွာသား
တစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ ပြီး သူမဟာ အဲဒီအဖြစ်အပျက်အတွက် ရှက်လွန်းလို့ တိုင်ကြားခဲ့ 
သူမကို အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်းကို ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်သိရှိခဲ့ ရပြီး
နောက်မှာတော့ကျေးရွာနေ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများက သူမရဲ့ မိသားစုဟာ
သူမကို ကြိမ်ဒါဏ်အပြစ်ပေးဖို့ သဘောမတူမချင် အဲဒီမိန်းကလေးကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ အမိန့် 
သူမကို အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ သူကိုတော့ အဆိုပါ ကျေးရွာအကြီးအကဲများက ခွင့် လွှတ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
သူမဘ၀ဟာ အခုလို အဓမ္မပြုကျင့် သူကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ ရပြီး၊ သူမအနေနဲ့ တရားမျှတ မှုကို
အလိုရှိပါတယ်လို့အဆိုပါမိန်းကလေးကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလိုမျိူးအဖြစ်အပျက်တွှေရှိနေပါသေးလားဆိုတာ သိစေချင်လို့ တင်ပြပါတယ်....
The girl was raped bya20-year-old villager in Brahmanbaria district in April last year. She was so ashamed following the attack that she did not lodgeacomplaint.
Her rapist was pardoned by the elders. She said the rapist had "spoiled" her life. "I want justice," she said.
Posted by Unknown | at 5:18 AM |3comments
Colombian farmer castrates himself to avoid cheating on wife
တစ်ကယ်တော့ အခုလိုမျိူးအဖြစ်အပျက်များ တစ်ကယ်ပဲအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ မယ်ဆိုယင် ယောကျာင်္း
တစ်ယောက်အတွက် ထိတ်လန့် စရာအိပ်မက်ဆိုးကြီးပမာဖြစ်ရမှာဆိုပေမယ့်ကိုလံဘီယာနိုင်
ငံသား လူးဝစ်အယ်လ်ဖွန်ဆို ဆန်ချက် အတွက်ကတော့ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရဖို့ အကြောင်းပြချက်
ခိုင်ခိုင်လုံလုံကို ရှိနေခဲ့ ပါတယ်...
အသက်လေးဆယ်အရွယ်ရှိ လယ်သမားယောကျာင်္းဟာ သူ့ ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက သူနဲ့ ချစ်ခင်ယုယ၊
ချစ်တင်းနှောဖို့ လက်မခံပဲဆန့် ကျင့် ကန့် ကွက်နေခဲ့ တာမို့ဇနီးဖြစ်သူကို သစ္စာဖောက်မိမဲ့ အ
ဖြစ်ကနေရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ အတွက် သူ့ ကိုယ်သူ သင်းကွပ် ( ဝှေးသင်း ) ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာ ယခင်ကာလတွေကတည်းက ၀က်တွေ၊ ကြောင်တွေ၊ ခွေးတွေ ကိုသင်းကွပ်နေကျမို့ အဲဒီ
တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလုပ်သလို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ သင်းကွပ်ပြီး သုံးရက်လောက်ကြာယင် အနာကသက်
သာပျောက်ကင်းသွားလိမ့် မယ်လို့ ယူဆပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေကိုသူသင်းကွပ်ခဲ့ သလိုပဲ သူ့ ကိုယ်သူ အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
” ကျွန်တော့ မိန်းမက လင်စိတ်သားစိတ်ကုန်ခမ်းသွားတာမို့ သူမကိုလည်း စိတ်အနှောက်အယှက်
မပေးချင်တော့ တာရယ်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လည်း အပြင်မှာ သွား
ရောက်ပြီး အခြားတစ်ပါးအမျိူးသမီးနဲ့ ပျော်ပါးဖို့ မသင့် တော်တာတွေကြောင့် အခုလိုပြုလုပ်ဖို့ ဆုံး
ဖြတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...” လို့ သူကဆိုပါတယ်...
အဆိုပါလယ်သမားယောကျာင်္းဟာ ဆန်တန်ဒါ ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေပြီး ဒါဏ်ရာမှသက်
သာလာနေပါပြီလို့ ဆရာဝန် ဇာဗီယာမာတီနက်ဇ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
” အခုတော့ သူ့ မှာ အနာကမကျက်ပဲ ယင်းနေကာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခဲ့ ပါတယ်..သူ့ ကို ဆီလမ်း
ကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှု ဌာနကနေစစ်ဆေးကုသပေးတဲ့ အခါ သူမှာ ဝှေးစေ့ တွေ မရှိတော့ တာ
ကိုတွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်...” လို့ ဆရာဝန်ကထပ်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အစ်ကိုရော အဲဒီလိုလုပ်မှာလားလို့ မေးလာခဲ့ ယင် ....
It isaman's worst nightmare but for Colombian farmer Luis Alfonso Sanchez it seemed the logical thing to do.The 40-year-old decided to castrate himself to avoid cheating on his wife who refused to have sex with him.
"When I saw that I could no longer count on her (his wife), so that I would't keep bothering her, I made the decision to cut my testicles off because I amaChristian and did not want to go look for another (partner)."The man is being treated at Santander Hospital where Dr. Javier Martinez said he is still healing: "He still has an escroto-penial hematoma. He's been looked at by the urology department, and they foundacomplete absence of the testicles." According to doctors, Sanchez's wounds have become infected.
Posted by Unknown | at 11:24 AM |4comments
ဤ ရေကူးကန်ကြီးဟာ လူ့ စိတ်ကူး၊ အတတ်ပညာနဲ့ စီမံတည်ဆောက်ထားခဲ့ ပြီး အရှည် ပေပေါင်း
၃၃၂၃ ပေရှိပြီး အကျယ်ကတော့ ဧကပေါင်း ၈၀ ကျော်ရှိပါတယ်တဲ့ ...
အနက်ဆုံးနေရာမှာ ပေပေါင်း ၁၁၅ ပေ နက်ရှိုင်းပြီး ရေပမာဏပေါင်း ဂါလံ ၆၆ သန်း တည်ရှိဆန့် 
သင်ဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးရေကူးကန် မှာသာ ရေကူးချင်ယင်တော့ချီလီနိုင်ငံ၊ အယ်လ်ဂါရိုဘိုဒေသ
ရဲ့ဆန် အယ်လ်ဖွန်ဆို ဒယ်မာ ဆီကိုသွားရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်....
အဲဒီရေကန်ကြီးမှာတော့ ကျောက်သလင်းလို ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေတွေကို အ
မြဲမပြတ်သန့် ရှင်းနေအောင် ကွန်ပြူတာနဲ့ စနစ်တကျ ထိန်းချူပ် သန့် စင် ပေးထားပါတယ်...
ဒီရေကူးကန်ကြီးဆောက်ရတာ ဈေးတော့ မသက်သာလှပါဘူး....ကုန်ကျစားရိတ် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီ
ယံ ရှိခဲ့ ပြီး၊ နှစ်စဉ် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခ စားရိတ်ကတော့ဒေါ်လာ ၄ သန်း ဖြစ်ပြီး စဖွင့် ကတည်းက
လာရောက်လည်ပတ်ကြည့် ရှု အပန်းဖြေကြတဲ့ သူတွေ အမြောက်အများရှိနေကြပါတယ်...
ကုန်ကျတဲ့ စားရိတ်ကြီးသလောက်လဲ ခမ်းနားလှပလွန်းလို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြတာပါပဲ....
မျက်စေ့ တစ်ဆုံး ....မိုးတစ်ဆုံး....
ကြည်လင်အေးမြသည့် ရေတွေလည်းရှိလို့ .....
လှေနဲ့ လည်မှသာ ဟိုဘက်သည်ဘက်ရောက်ပေလိမ့် မယ်...
မိုးလုံလေလုံ ရေကူးကန်ပါ တစ်ဆက်တည်း ဆောက်လုပ်ထားသေးတယ်....
လေယာဉ်ထက်က ဓါပုံရိုက်မှပဲ အစအဆုံးမြင်ရတော့ တယ်....
Posted by Unknown | at 11:53 AM |0comments
Ocala couple have chicken with odd anatomy
ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Alfredo Cruz နှင့် အတူတွေ့ ရတဲ့ ဖင်နှစ်ပေါက်နဲ့ ကြက် မ J-Lo
Alfredo Cruz of Ocala holds his chicken J-Lo Wednesday afternoon outside the Marion County Extension Office.
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဖလောရီဒါပြည်နယ်၊ အိုကလာဒေသ ကဇနီးမောင်နှံတစ်စုံရဲ့ ခြံမှာ ထူးထူးဆန်း
ဆန်း ဖင်နှစ်ပေါက်နဲ့ ကြက်မ တစ်ကောင်တွေ့ ခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
သူတို့ အနေနဲ့ ပိုမိုသေချာအောင်လို့ ဒေသဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်ကျွမ်းကျင်သူ Nola Wilson ရဲ့ အကူ
အညီနဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ ပြီး Wilson ကိုယ်တိုင်က အဲဒီကြက်မဟာ တစ်ခြားကြက်တွေနဲ့ မတူ တမူထူး
ခြားစွာ ဖင်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်လို့ အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကြက်များကို အပျော်သဘောနဲ့ ဥစားဖို့ မွေးမြူလေ့ ရှိတဲ့Alfredo နဲ့Ana Cruz တို့ ဇနီးမောင်
နှံဟာ သူတို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဆီကနေ ထိုကြက်မ ကိုမကြာသေးခင်က ၀ယ်ယူခဲ့ တာဖြစ်တယ်
၀ယ်ယူပြီးစမှာတော့ ဘာမှသတိမထားမိပဲ ရသတ္တပါတ် အတန်ကြာမှ ကြက်ရဲ့ နောက်ပိုင်းဟာ တစ်
ခြားသာမာန်ကြက်တွေထက် ပိုမိုကြီးမားနေတာကိုသတိပြုမိပြီး အမွေးအတောင်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်
ကြည့် တော့ မှပဲ အခုလိုထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်ကိုတွေ့ မိခဲ့ တာပါ...
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ အဆိုပါထူးဆန်းတဲ့ ကြက်မ ကို နောက်ပိုင်းအလှနဲ့ နာမည်ကျော်တဲ့ ရုပ်ရှင်
မင်းသမီး၊ အဆိုတော် ဂျင်နီဖာလိုပက်ဇ် အတိုင်းပဲ နာမည်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်...
” ကျွန်တော့် ကြက်မ ကတော့ မင်းသမီး ဂျေလို ထက် ပိုပြီးနောက်ပိုင်း ပုိုပါတယ်...” လို့ ပိုင်ရှင်
ဖြစ်သူ Alfredo ကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီ အထူးအဆန်းအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအနက် တစ်ခုကတော့ အစာဟောင်းစွန့် ပစ်ပြီး၊ တစ်ခုက
ကြက်မ ဥ , ဥ တဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကတော့ သူ့ ရဲ့ ကြက်ကိုအမြတ်များများရလည်းရောင်းပစ်မှာမဟုတ်ပဲ ဆက်လက်မွေးသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်...
ဗီဒီယိုကြည့် ချင်ယင်တော့ အောက်ကလင့် ခ်ကလေးကိုသာနှိပ်လိုက်ပါလေ...
With the help of Nola Wilson,asmall animal extention agent with the Marion County Extension Office, Wilson verified that Cruz's chicken in fact has two two pubic areas. The two pubic areas is where chickens lay eggs and relieve themselves. "We give the eggs away to neighbors," Cruz said. "We just want to keep her. We don't want to make any profit. Now we'll keep her until one of the hawks come and get her," Cruz said withachuckle.
There isachicken in Ocala with two rear-ends.
"You know the singer? She hasalot of butt. Well, this one is bigger," Alfredo said Wednesday, motioning toward the chicken, which was snacking on uncooked rice and casually strolling around her pet-carrying case.
He spoke from the Marion County Agricultural Complex, where the couple met Nola Wilson, the small-animal extension agent. The appointment was set up so Wilson could examine the chicken.
Wilson's professional assessment: Yes, J-Lo has two pubic regions, one slightly larger than the other. And, no, Wilson has never seen anything like it.
Posted by Unknown | at 10:27 AM |3comments
Labels: news : ocala.com
Net paedo snared as wife poses as girl, 14
ဘဘကြီးက မြက်နုနုလေးတွေကိုမှကြိုက်သတဲ့ လား.... အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် ဖောက်ပြန်ချင်သည့် အတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မိန်းကလေးများအားသွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူလိင်စိတ်မူမမှန်သည့် ကာမရမက်ကြီးမားသူအိမ်ထောင်ရှင် အဘိုးကြီးတစ်ဦးကို သူ့ ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက အသက် ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအဖြစ် အင်တာနက်ချက်ရွန်း စာမျက်နှာမှာ ဟန်ဆောင်ပြီးထောင်ချောက်ဆင်ကာလက်ပူးလက်ကြပ်ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်...
မြက်နုနုလေးတွေကိုမှ ကြိုက်တတ်သူ သစ္စာရှင်ကြီး....
အယုံကြီးယုံမိခဲ့ လို့ ....
ထိုရာဂဘီလူး ဖြစ်သူ David ရဲ့ ဇနီး၊ သားသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ အန်တီကြီး Cheryl
Robert ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်း တစ်ယောက် သူ့ ရဲ့ စာကြည့် ခန်းထဲက ကွန်ပြူတာနဲ့ အချိန်ကုန်
တာတွေများနေလို့ သံသယ ၀င်လာခဲ့ ရပါတယ်...
တစ်ချိန်မှာတော့ အသက် ၆၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့( အင်း ဘုရားနဲ့ တရားနဲ့ နေရမယ့် အရွယ် )
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အပြင်ခဏထွက်သွားခိုက် သူ့ ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ မဖွယ်မရာစာသားတွေ
တန်းလန်းနဲ့ ထားပစ်ခဲ့ တာကိုတွေ့ လိုက်ရတာနဲ့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဘယ်အချိူးတွေချိူး
လို့ ဘယ်လိုဇတ်လမ်းတွေထွင်နေသလဲဆိုတာသိလိုက်ရလို့ အချိန်မဆိုင်းပဲ လူယုတ်မာကို
အဘသစ္စာရှင်ကြီး ( သူကအသစ်ကလေးတွေတွေ့ တိုင်းဆာနေတတ်လို့ လေ...) ကသူ့ 
ရဲ့ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်မှာ ” မင်းကလေးဟာ တော်တော်လှတဲ့ အလန်းဇယားလေး
ပါပဲ ” လို့ ရေးထားပြီး အဲဒီစာသားအောက်မှာတော့ သူ့ ရဲ့ နာမည်ပြောင် Corky ဆိုပြီး
အဲဒါနဲ့ အန်တီကြီး Cheryl ဟာ သူတို့ နေထိုင်တဲ့ ဝေလနယ်တောင်ပိုင်းက Bridgend
အရပ်က သူတို့ ရဲ့ အိမ်ကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူပြန်လာပြီး အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်ကိုရောက်
လာတဲ့ အထိစောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီနောက် သေချာပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ရဲ့ တစ်ခြားအခန်းက ကွန်ပြူတာနဲ့ သူမကိုယ်သူမ ၁၄ နှစ်သမီး
အရွယ်ကျောင်းသူလေး အဖြစ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဟန်ဆောင်လိုက်ပြီး ကြောင်ဖားကြီးနဲ့ အဆက်အ
မကြာခင်မှာပဲ သားကောင်ရနံ့ ရတဲ့ယခင်အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟောင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ သူမကို
ကျောင်းသူကလေးလို့ ထင်မှတ်ပြီး မဖွယ်မရာပြုဖို့ မြူဆွယ်ဖျားယောင်းပါတော့ တယ်...
သူတို့ နှစ်ဦး အင်တာနက်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ချက်တင် ( chatting ) လုပ်ယင်းနဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ
ကွန်ပြူတာမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီး မဖွယ်မရာအပြုအမူတွေ လုပ်ပြနေခဲ့ တာ
ကို အနီးအနားက အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ထိတ်လန့် အံ့ သြစွာနဲ့ပဲကြည့် မြင်နေခဲ့ 
အဲဒါနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာပေါင်းသင်းလာခဲ့ တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူခမျာ စကားတစ်ခွန်းမျှ မပြောတော့ 
ပဲ သူ့ အကြောင်းကို သတင်းပေးတိုင်ကြားဖို့ ရဲစခန်းဆီကိုသာတိုက်ရိုက်ထွက်ခွာလာခဲ့ ပါတော့တယ်...
ရဲများက သူ့ ရဲ့ ကွန်ပြူတာကို သိမ်းဆည်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့အရွယ်မရောက်သေးသူ
ကလေးသူငယ်များရဲ့ မဖွယ်မရာ ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်...
Cardiff Crown တရားရုံးတော်က သူ့ ရဲ့ အမှုကို ရသတ္တပါတ်ပေါင်းများစွာစစ်ဆေးကြားနာခဲ့ ပြီး
တဏှာရူးကြီး Roberts ကတော့ သူဟာ အင်တာနက်က ကလေးသူငယ်များရဲ့ မဖွယ်မ၇ာဓါတ်ပုံ
တွေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီးကူးယူနေတာကို တွေ့ မြင်သွားလို့ အဖမ်းခံခဲ့ ၇တာလို့ ထင်မှတ်နေပါသေးတယ်...
နောက်ဆုံးရဲများက သူ ” စား ” ဖို့ ကြံစည်ဖျားယောင်းနေတဲ့ ကလေးမလေးဟာ တစ်ခြားသူမဟုတ်
ပဲ သူ့ မိန်းမကနေ အယောက်ဆောင်ထားတာ၊ ပြီးတော့ သူမကပဲ သူ့ ကိုရဲလက်အပ်လိုက်တာလို့ 
လည်းပြောလိုက်ရော သူဟာ အလွန်အမင်း အံ့ အားသင့် သွားခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ ရာမှာ Roberts က သူဟာ မိန်းကလေးငယ်များနဲ့အတူလိင်ဆက်ဆံ ခဲ့ ခြင်း
မရှိပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဒါပေမယ့် အခွင့် ရယင်တော့ ပြုလုပ်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေခဲ့ ပါတယ်လို့ 
Roberts ကို လိင်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသင်တန်းစီမံချက်
တွေကို မပျက်မကွက်တက်ရောက်ရန်နှင့် သုံးနှစ် တိတိလူမှုရေး၊ ကူညီမှုလုပ်ငန်းများ အခမဲ့ 
ဆောင်ရွက်စေရန်အမိန့် ချအပြစ်ပေးခဲ့ သည်...
( သူတို့ ဆီမှာတော့ ပြစ်မှုအသေးစားလေးများအတွက် ထောင်မချပဲ ထိုသို့ သောအိုးမကွာအိမ်
မကွာနေပြီး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ အခမဲ့ လုပ်စေခြင်းဖြင့် အပြစ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်...)
သူ့ အား အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့် သေးသူ ကလေးသူငယ်များနှင့် လည်း လူကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊
အွန်လိုင်းမှသော်၎င်း ဆက်သွယ်ခြင်းမပြု၇န်တားမြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်...
Roberts နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ တဲ့ အန်တီကြီး Cheryl ကတော့ သူမအနေနဲ့ အခုလိုကြောင်သူတော်
ကြီးကို နောက်ယောက်ခံလိုက်ပြီး ရဲစခန်းပို့ ခဲ့ တာကိုနောင်တမရခဲ့ ပါဘူးလို့ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်
ဦးကိုပြောကြားခဲ့ ပြီး သူ့ ကို သည့် ထက်ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ အပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်သင့် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
” သူဒီလို အပြစ်ဒါဏ်ပေါ့ ပေါ့ လေးပဲရခဲ့ လို့ အံ့ သြမိပါတယ်...ကျွန်မကတော့ သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ 
အပြစ်မရခဲ့ ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်...တရားသူကြီးအနေနဲ့ သူ့ ကို ပိုမိုသဘောထားတင်းမာသင့် ပြီး
ထောင်ထဲကိုတစ်ခါတည်း ပို့ လိုက်သင့် ပါတယ်...”
” ကျွန်မတော့ဖြင့် အခုထက်ထိ သူ့ ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတုံးပါပဲ...ကိုယ်နဲ့ လက်ထပ်ပေါင်း
သင်းနေခဲ့ တဲ့ သူတစ်ယောက်က ဒီလိုမျိူးလုပ်လိမ့် မယ်လို့ စဉ်းတောင်စဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး...”
” ကျွန်မဟာ လုပ်သင့် တယ်လို့ ထင်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ တာမို့ နောင်တ လုံးဝမရပါဘူး...
အခုတော့ အရာအရာအားလုံးကိုမေ့ ထားလိုက်ဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်စုံတစ်ရာလောက်ပဲ
ပေးရမှာပါ...” လို့ အန်တီကြီးက ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
တရားခံရဲ့ ရှေ့ နေ Byron Bradstock ကတော့Roberts ဟာ ထိုစဉ်က ရမ္မက်ဆန္ဒအမှောင်ဖုံး
လွှမ်းနေခဲ့ လို့ အခုလို ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ မိတာပါလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်....
သူ့ ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာအဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့ ပြီး သူ့ ဇနီးနဲ့ လည်းချစ်ချစ်ခင်ခင် မနေရတာ ကာ
လ အတန်ကြာခဲ့ ပါပြီလို့ ရုံးတော်မှာလျှောက်ထားခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာ သူ့ ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော၊ မိသားစုအတွက်ပါ အရှက်ရစေခဲ့ ပါတယ်လို့ ရှေ့ နေကြီးက
ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ဗျာ....
ကိုယ့် ရဲ့ ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်း ကိုကိုသစ္စာရှင်ကြီးများလည်း ကိုယ်ကျင့် သီလ ကောင်းမကောင်းသိချင်ယင်
အဲဒီအန်တီကြီးလို့၁၄ နှစ်ကျောင်းသူလေးလို အွန်လိုင်းမှာ အကောင့် ( account ) ဖွင့် ပြီး စမ်း
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှန်းတော့ သူမသိစေနဲ့ နော်...
ကိုယ့် ဆရာတို့ ရေ...ဖွတော့ ဖွလိုက်ပြီနော်...
Mum-of-two Cheryl Roberts became suspicious about the amount of time husband David spent on his computer in his study.
And she sprang into action after seeingalurid message left on the machine by Roberts, 69, while he went out.
It said, "You areaf****** beautiful bitch" and was signed with his nickname, Corky. Cheryl waited until Roberts went back online at their home in Bridgend, South Wales.
She then createdaprofile ofa14-year-old schoolgirl on another computer inadifferent room - and contact was made.
Soon ex-pub landlord Roberts propositioned her, thinking she was the girl, and asked her to meet him for sex.
He usedawebcam as he "chatted". And Cheryl, justafew yards away from him in reality, watched horrified as he performedasex act.
Cops seized his computer and found dozens of child porn images on it. Cardiff Crown Court heard that for weeks, Roberts believed he had been caught through downloading the pictures.
And he was stunned when cops eventually told him the "girl" he was grooming was wife Cheryl - and she had shopped him.
During interviews Roberts denied having sex with any young girls but admitted he was "prepared to do so".
He admitted engaging in sexual activity in the presence ofachild, and making and possessing illegal images.
Roberts was givenathree-year community order with compulsory attendance onasex offenders programme.
He was also banned from having access in person or online to children under 18.
Cheryl, who has divorced Roberts, toldafriend after the case she had no regrets over nailing him - and that his punishment should have been more severe.
The wife - married to Roberts for 20 years - said nothing to him but went straight to police and the NSPCC.
She said: "I was shocked - I don't think he got what he deserves. I thought the judge would bealot harder and he might go to prison."
Cheryl added: "I still feel very angry towards him. It is hard to thinkaman you married could do this.
Defence lawyer Byron Bradstock said Roberts was going througha"dark patch" at the time of the offence.
His marriage was failing and any intimacy with his wife wasadistant memory, the court was told.
Mr Bradstock added: "He has brought shame on himself and his family."
Posted by Unknown | at 12:02 PM |0comments
လမ်းလျှော်ကရလွန်းလို့ မီးပွင့် တယ်ဆိုတဲ့ စကားလို့ ပေါ့ ...
စီးကရက်နဲ့ မှားပြီးမသောက်လိုက်နဲ့ ဦး...
ရေခဲ့ မုန့် မဟုတ်ဘူးနော်...
မကြေနပ်ယင်...မီးခြစ်နဲ့ ထုလို့ ရတယ်...
ရသေ့ စိတ်ဖြေ ...ပစ်ပါလေ...
ကြောက်စရာကွယ့် ...မနောက်ပါနဲ့ ...
Posted by Unknown | at 10:57 AM | 1 comments
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့ မှ မဟာမြိုင်ဆ၇ာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ တရားပွဲ...
တရားနာ ပရိတ်သတ်အပြည့် လာရောက်တဲ့ တရားပွဲတွင် ဟောကြားနေသောဆရာတော်...
Sayadaw U Jotika speaking to jam-packed corwds
လွန်ခဲ့ တဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ က ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်
မဟာမြိုင်ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဟောကြားတဲ့ တရားပွဲကို ဗန်ကောက်
မြို့ မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာခန်းမ မှာပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဆရာတော်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဟောတာကို ထိုင်းအမျိူးသမီးတစ်ဦးက ထိုင်းဘာသာကို
အယုဒ္ဓယ တက္ကသိုလ်ရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များနှင့် ဆရာတော်ဦးဇောတိက....
Myanmar monks from the Monks university in Ayutthaya jumped at the chance to meet one of their own living masters.
Sayadaw U Jotika. Simply awesome.
မင်္ဂလသုတ္တန် တရားတော်ပါ လောကဓံတရားများနဲ့ ကြုံတွေ့ ၇တိုင်းမတုန်မလှုပ်၊ ဒေါသ၊သောက
ကင်းစွာနေနိုင်ခြင်း ဆိုတဲ့ ဖုဋ္ဌဿလောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံယဿ နကမ္ပတိ တရားပုဒ်ကို အသေးစိတ်
ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း၊ ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်းဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ ကင်းလွတ်ခဲ့ တာမဟုတ်
လို့လူတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ လည်း မလွဲမသွေကြုံလာရမှာမို့ စိတ်ဆိုး၊စိတ်ပျက်ခြင်းကင်းစွာနဲ့ ရင်
ဆိုင်တုံ့ ပြန်တတ်ဖို့ ဆရာတော်က သူ့ ကိုယ်တွေ့ နဲ့ ရှင်းပြဟောကြားသွားခဲ့ ပါတယ်...
ကိုယ့် ကိုကဲ့ ရဲ့ ပြစ်တင်၊ ဝေဖန်ဆဲဆိုနေတာတွေကို စိတ်ဆိုး၊စိတ်ပျက်၊ဒေါသထွက်ပြီးတုံ့ ပြန်နေခဲ့ 
ယင် သူတို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဟာသူတို့ ကြိုးဆွဲရာ က တဲ့ ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်မှန်းမ
သိဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆရာတော်ဆုံးမဟောကြားတာကို ဖတ်ရှုနာယူ ကြည်ညိုရပါတယ်...
အဲဒီလိုအခြေအနေမျိူးဖြစ်လာယင်လည်း ဘာမှမတုံ့ ပြန်ပဲ တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို
သာဆက်လုပ်ပါ...ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာ အချိန်ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့် မယ်လို့ ဟောကြား
ပြီးတော့ ဆရာတော်က သူ့ ဘ၀နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဖတ်ရှုလေ့ လာမှတ်သားကျင့် ကြံခဲ့ တဲ့ အတွေ့ အကြုံ
အရ သူ့ ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့ လို့ ပြောတဲ့ ဗုဒ္ဓကို ပိုလိုသာချစ်ခင်ကြည်ညို၊ ယုံကြည်ပါတယ် လို့ ဟာသ
စွက်ပြီး ဟောသွားခဲ့ ပါတယ် ( ကာလမသုတ္တန်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် ...)
တရားဟောတိုင်း လေသံအေးအေးလေးနဲ့ ဟောတတ်တဲ့ အသံတော်ကိုမှန်းဆပြီး ပူဇော်
အောက်မှာတော့ ဆရာတော်ရဲ့ အကြောင်းအကျဉ်းချူပ်နဲ့ ဆရာတော့် တရားပွဲအကြောင်းအင်္ဂလိပ်
Last night’s talk was wonderful example of that. A popular and respected teacher here in Bangkok, Sayadaw U Jotika, originaly from Burma, spoke about ‘Praise and Blame’ and based his talk on the reference to the eight vicissitudes of life in the Mangala Sutta. He recited the Pali, explained each phrase, and then focused on one small section, explaining why praise and blame are vicissitudes, and giving practical ideas for dealing with them.
After every few minutes U Jotika, speaking in English, would pause while his talk was translated into Thai, giving the eveningagentle, rolling, rhythm, and inahall packed with hundreds of people, with the crowd spilling even into the corridors outside, there wasawonderful attentive silence throughout. “But” he said, “the Buddha said not to believe”, and it was that which, and U Jotika pointed out the humour in this, brought him to trust and love the Buddha.
“Then it becomes my religion, very personal, and not the same as anyone else’s” he said. “Not inapossessive way, but in suchaway as it’s fully yours and infuses your whole life.” And he gave examples of how he himself learnt to deal with blame, based on seeing for himself how his responses worked. At first, when criticised, he’d argue back, later he’d just try to explain, later still he realised that he didn’t need to do anything.
In the long run it becomes obvious who is right or wrong. There’s no need to say anything. Stop, he said, let go, and move on. This gives you more freedom. If you respond to every criticism, he said, you areapuppet, in the control of others. It’s the same if you seek praise. The solution is mindfulness. Pay attention to your mind and the qualities of your mind, pay attention to how you feel when praised or blamed, and you will overcome.
Listen to your own wisdom. And do listen to the advice of people you know to be wise. And when giving criticism to others, as fromaparent toachild for example, be calm, he said, make sure the time is right, and don’t do it publicly to bring shame on anyone. Educate, don’t punish. And don’t forget that the biggest critic is yourself, so correct yourself and regain your self-respect.
These lessons from the Mangala Sutra, he repeatedly pointed out, are to be lived and not just recited. Don’t be manipulated by praise or blame, and don’t use praise and blame to manipulate others. Live out your own life, he said, and don’t allow the world to be your master. The less you are effected by the opinions of others, the more you can rely upon mindfulness and your own wisdom, the more freedom and dignity you have.
The evening finished with some chanting, including some of those hymn-like chants that I really love listening to, and many people stayed to make merit and buy copies of U Jotika’s books in Thai and English. I bought his most popular book, Snow in Summer, which has sold overamillion copies, and hope to read it some time soon. If the book contains the same wisdom and inspiration as I saw in the talk last night, I’m in forareal treat.
Posted by Unknown | at 10:21 AM |3comments
Labels: article : dhamma
1mm tiger sculpture is smaller thanagrain of rice
ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံး အပ်နဖားထဲထည့် နိုင်လောက်သည့် ကျားရုပ်ကလေး....
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ အရာဝတ္တများကို အသေးငယ်ဆုံးအရွယ်အစားအဖြင့် အနုစိတ်ဖန်တီးတဲ့ ပန်းပု
အနုပညာရှင်တစ်ဦးဟာ အပ်နဖားပေါက်အတွင်းထည့် သွင်းနိုင်မည့် ကမ္ဘာ့ အသေးငယ်ဆုံး
ဆန်စေ့ ထက်ပင်သေးငယ်သည့် ကျားရုပ်ကလေးတစ်ခုကို ထုလုပ်ဖန်တီးခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအရုပ်ကလေးဟာသေးငယ်လွန်းလို့ အပ်နဖားပေါက်ထဲကိုထည့် သွင်းနိုင်တာမို့ သေသေချာချာ
သဲသဲကွဲကွဲ မြင်နိုင်ရန် မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့် ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အခုလို အရုပ်ထုလုပ်ခဲ့ တဲ့ သက်တမ်း အနှစ် ၃၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့Chen Forng-shean ဟာ လာမယ့် 
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မယ့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အမှီပြုလုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်
၀.၁၄ လက်မ အရွယ်မြင့် ပြီး ၀.၁၄ မီလီမီတာသာ ရှည်လျားလို့ အဲဒီကျားရုပ်ကလေးဟာ ကမ္ဘာ
ဒါပေမယ့်Chen ကတော့ ဒီအရုပ်ကလေးပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ဖို့ဆယ်ကြိမ်ကျော်ကျော် လောက် အထူး
ကြိုးစားခဲ့ ၇တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
လက်ကတုန်ပြီး တစ်ချက်ကလေးချော်သွားတာနဲ့ပဲ့ ထွက်သွားပြီး ပျက်သွားတယ် လို့ သူကဆိုပါတယ်...
” ကျားရုပ်အနေနဲ့ သုံးဖက်မြင်ဖြစ်အောင်ထုလုပ်တာဖြစ်မို့ အခက်ခဲဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်... ဘယ်နေရာက
ကြည့် ကြည့် အသက်ဝင်နေပါတယ်...ဆေးရောင်ထည့် သွင်းရတာလည်း အတော့ ကိုခက်ခဲပါတယ်..
ကျားရုပ်ကျောဘက်ကအစင်းကြားတွေနဲ့ကျားပါးစပ်ထဲကလျှာကို အနီရောက်ခြယ်ရတာလည်းပါ
၀င်ပါတယ်...” လို့ အသက် ၅၄ နှစ်ရှိ Chen ထပ်ပြောပြပါတယ်...
သုံးလလောက် အသေးစိတ် အပြင်းအထန် ထုလုပ်ခဲ့ ရတဲ့ ကျားရုပ်ကလေးကို နိုဝင်ဘာလမှာ ထု
ပုံလောင်းကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေခဲ့ သူ Chen က သူ့ အရုပ်က
လေးဟာ ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ သုံးသန်း ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၄၀၀၀ ကျော် ) တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ဆို
ခဲ့ ပြီး ရောင်းချမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်....
တော်ရုံပါရမီမျိူးနဲ့ တော့ ဖန်တီးထုလုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး...
A Taiwanese artist has created what he claims is the smallest sculpture ofatiger ever made - so small it could fit through the eye ofaneedle, and can only be seen properly withamagnifying glass. Chen Forng-shean, who has been sculpting asahobby for around 30 years, carved the tiger from resin in anticipation of the Chinese lunar Year of the Tiger, which begins on February 14.
Standing at just 1 millimetre (0.04 inch) high, and just overamillimetre long, he says that it's the world's tiniest tiger.
But Chen admits that the brightly coloured beast nearly got the best of him over 10 attempts to create it: 'If the hands shakealittle bit, the work would jump away and disappear.'
The single animal, created after three months of intensive labour, was finished in November and Chen -aminting plate designer by trade - said it was worth3million Taiwanese dollars (around £58,000), although it is not for sale.
Posted by Unknown | at 2:57 AM |3comments
Vietnam Gem Mine Owner Aims to Carve World's Biggest Jade Buddha
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ကျောက်မျက်သူဌေးက မြန်မာ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးဖြင့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး
သွားပြီ....မရှိတော့ ဘူး ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကလို...
ကိုယ့် နိုင်ငံက ဂုဏ်ယူရမယ့် ရတနာ သူများနိုင်ငံဆီရောက်ခဲ့ ရပြီ....
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ခေတ်သစ်ကျောက်မျက်သူဌေးတစ်ဦးဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးကျောက်
စိမ်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတစ်ဆူ ထုလုပ်ကိုးကွယ်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ လွန်ခဲ့ တဲ့ တနင်္လာ
နေ့ က ကြေငြာခဲ့ ပါတယ်...
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ကျောက်မျက်တွင်းပိုင်ရှင်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့Dao Trong Cuong ဟာ
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးက နာမည်ကျော် ၃၅ တန်အလေးချိန်ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို
အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သန်းနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့ ပြီး လွန်ခဲ့ တဲ့ အောက်တိုဘာလ ကဗီယက်နိုင်ငံကိုတင်
အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျောက်ဆစ်အနုပညာရှင် ၅၀ က စတင်ထွင်းထုနေခဲ့ ပါတယ်...
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကြီးထုဆစ်ပြီးပါက တန်ချိန် ၂၀ မျှရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ မျှော်လင့် ထား
” ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်မှတ်တမ်းများစာအုပ်မှာ မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ယုံ
ကြည်နေကြပါတယ်...” လို့Cuong က လူပေါင်း နှစ်ထောင်နီးပါးတက်ရောက်တဲ့ အမြင့် ၁၀ ပေ
အလား ၆.၅ ပေ ရှိတဲ့ အဆိုပါ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး အားဖွင့် လှစ်ပြသသည့် အခမ်းအနားတွင်ပြော
အဆိုပါ ဖွင့် ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကျောက်မျက်သူဌေး၏မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သမ္မတကြီး
Nguyen Minh Triet အပါအ၀င် ထိပ်သီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး ဗီယက်
နမ် ရဟန်းတော် ၂၅၀ ပါးခန့် က ရွတ်ဖတ်သရ္ဇာယ်ခဲ့ ကြပြီး ခေါင်းလောင်းများတီးခတ်ပူဇော်ခဲ့ ကြ
” ဒီကျောက်စိမ်းရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ လက်ရာမြောက်မှုလက်မှုအနုပညာဖန်တီး
မှုဟာ နောင်လာနောက်သားမျိူးဆက်ပေါင်းများစွာအထိလက်ဆင့် ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်
သွားမှာဖြစ်ပါတယ်...” လို့ သမ္မတကြီးက ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သမ္မတ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့ တယ်...
လောလောဆယ်ကျောက်တုံးကြီးမှာ ပုဒုမ္မကြာပွင့် ပေါ်မှာစံပယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ပန်းချီးပုံနဲ့ 
တန်းဆာဆင်ထားတဲ့ အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် လိုက်ကာဖွင့် ပြီးအခမ်း
အနားကိုဖွင့် ပေးခဲ့ ပါတယ်...
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ထုလုပ်ပြီးစီးဖို့ အချိန်နှစ် နှစ်လောက်ကြာမြင့် မယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
လောလောဆယ်တော့ ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်းစံချိန်မှာတော့ အကြီးဆုံးကျောက်စိမ်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဆို
တာတော့ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ဗီယက်နမ်သတင်းများရဲ့ ဖော်ပြချက်အရလက်
ရှိအကြီးဆုံးကျောက်စိမ်းဆင်းတုတော်ကြီးကတော့အမြင့်၉ ပေ နှင့် အလေးချိန် ၄ တန် ရှိပြီး
မနှစ်ကပဲ ဗီယက်နမ်နဲ့ သြစတေးလျ နိုင်ငံဘုန်းကြီးကျောင်းများဆီသို့ ဒေသစာရီကြွရောက်အပူ
ဇော်ခံခရီးလှည့် လည်ခဲ့ ပါတယ်...
လူဦးရေ ၈၆ သန်းရှိတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့ ကွန်မြူနစ်အစိုးရက ဘာသာရေး အဖွဲ့ အစည်း
များကို တင်းကြပ်စွာထိန်းချူပ်ထားပြီး အများစုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါ
ဗီယက်နုမ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂိုဏ်းများအနေဖြင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများရှိခဲ့ 
ပေမယ့် လွန်ခဲ့ တဲ့ တနင်္လာနေ့ ကကျင်းပခဲ့ တဲ့ ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများကတော့ 
အစိုးရက ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်များ ဂိုဏ်းကဖြစ်ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံကဲ့ သို့ ပင် ယင်း၏မြောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်း ကွန်မြူနစ်အစိုးရအုပ်ချူပ်သော ဗီယက်နမ်
နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့ သောနှစ်များအတွင်းက ဈေးကွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီစဉ်
ဆောင်ရွက်ခဲ့ သဖြင့်ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုံး ၈ ရာခိုင်နှုံးခန့် ဖြင့် ၁၀ နှစ်ဆက်တိုက်
တိုးတက်လာခဲ့ သည့် အတွက် တစ်ချိန်က ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေး၏ ရှုံ့ ချဝေဖန်ခံခဲ့ ရသော သန်း
ကြွယ်သူဌေးများသည်လည်း ယခုအခါမှာတော့ အများစုအတွက်တော့ စံပြပုဂ္ဂိုလ် များအဖြစ်အလေး
ထားခံရကာ အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံကိုလည်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့ လေသည်...
Cuong ဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်နှောင်းများမှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ကျောက်မျက်တွင်းများခေတ်ထ ချိန်မှာ
သူရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှာ ပတ္တမြားနဲ့ မြ ကျောက်မျက် အစလေးများနဲ့ ပုံရိပ်
ကားချပ်မှာ အနုပညာမြောက်စွာ ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်...
သူဟာ ထိုပညာနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း၊ အမေ၇ိကန်သမ္မ
တဟောင်း ဂျော့ ခ်ျ ဘုရှ် နဲ့ ဘီလီယံနာ ဘီလ်ဂိတ် တို့ ရဲ့ ရုပ်ပုံကားချပ်များကို ဖန်တီးခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူဌေး Cuong ဟာသူ့ ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလည်း လျှိူ့ ဝှက်သို
သူဟာ ဒေါ်လာ သုံးသိန်းကျော် ပေးရတဲ့ အမေရိကန်လုပ် ဟန်းမားကား ကိုပထမဦးဆုံး ဗီယက်
နမ်နိုင်ငံကို တင်သွင်းပြီးအသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်...
ပိုက်ဆံများသာရမယ် ( ဒေါ်လာများသာရမယ် ) ဆိုလို့ ကတော့ဘာမှမချန်ပဲ အကုန်ရောင်းမယ့် 
-- One of the flamboyant entrepreneurs making it big in booming Vietnam unveiledamassive precious stone on Monday that he plans to transform into the world's largest jade Buddha.
Dao Trong Cuong, the owner ofaVietnamese gem mine, purchased the 35-tonne stone in Myanmar last year for $2 million and imported it to Vietnam in October. By the timeateam of 50 artists and sculptors finishes chipping away at it, the finished Buddha is expected to weigh nearly 20 tonnes.
"We hope to get it into the Guinness Book of World Records," Cuong toldacrowd of nearly 2,000 people duringaceremony unveiling the stone, which is 10 feet (3 metres) tall, 6.5 feet wide, and 6.5 feet deep.Cuong counts some of Vietnam's most powerful political figures among his friends, including President Nguyen Minh Triet, who spoke at Monday's ceremony after about 250 monks in saffron robes chanted and rang bells. "This unique artistic work will be passed on to many generations," said Triet. Triet pulled backacurtain covering the massive hunk of jade, which has been temporarily adorned withapainting ofatranquil Buddha sitting in the lotus position.
A search of the Guinness Book Web site showed no entries for the world's largest jade Buddha. But according to Vietnamese media reports, the world's biggest existing jade Buddha weighs4tons and stands9feet tall. It was taken onatour of Buddhist temples in Vietnam and Australia last year.
Buddhism is the largest religious faith in Vietnam,anation of 86 million where the government strictly controls religious organisations. While some Buddhist sects have been involved in highprofile conflicts with the government, the monks at Monday's ceremony belonged to the officially sanctioned Buddhist Church of Vietnam. Like China, its massive northern neighbour, communist Vietnam has implemented market reforms in recent years that have unleashed rapid economic growth, which has averaged nearly 8 percent for the last decade.
Once reviled by communist revolutionaries, millionaire businessmen are now seen as role models, creating jobs and developing the country.
Posted by Unknown | at 10:57 AM |2comments
ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးအလုပ်လေလား...
သေမင်းကို အံတုရင်ဆိုင်၊ စိုက်ကြည့် သူ...
အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးတဲ့Somphop ဟာ အခန့် မသင့် ယင် သူ့ ရဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်
မွေးနေ့ ကိုတောင် မြင်သွားရရှာမှာမဟုတ်ပါဘူး...
သင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာနေ့ စဉ် အခက်အခဲ၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုကြောင့် အံကြိတ်သီးခံနေရမှုတွေဟာ
ဒီပုံရိပ်တွေကိုကြည့် လိုက်ယင်တော့ သင်ခံစားနေရမှုဟာ ဒီလောက်မဆိုးပါဘူးလို့ သိလာပါလိမ့် 
သင့် အလုပ်ရှင်သူဌေးက သင့် ကိုဘယ်လောက်ပင် ဆူပူကြိမ်းမောင်း ဖိအားပေးစေကာမူ ယခု
ဓါတ်ပုံပါလူလောက်တော့ခြေလက်အင်္ဂါ၊ အသက်အန္တရာယ်မစွန့် စား ရသေးပါဘူး...
ယခုပုံတွေမှာပါတာတွေကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုက မိကျောင်းအလမ္ပါယ်ပြသူတွေ
ရဲ့နေ့ စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေပါပဲ....
အသည်းကောင်းပုံများကတော့ပြုံးပြုံးလေးတောင်ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံလိုက်သေးတယ်...
Let's not get snappy here: Somphop gives the cameraalittle smirk as he puts his head in between the jaws of death
ယခုအသည်းယားစဖွယ်ပုံတွေထဲမှာပါတဲ့ ပြကွက်တွေကတော့ Samphran Elephant Ground
တိရိစ္ဆာန်၇ုံက ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးအလုပ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကိုထင်းထင်း
ဘန်ကောက်မြို့ အစွန်မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်ရုံက မိကျောင်းအလမ္ပါယ်ပြသသူတွေ တင်ဆက်ပြသခဲ့ တာ
၁၉၈၅ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ တဲ့ အချိန်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်...
တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့ အဲဒီပြကွက်တွေထဲမှာဆိုယင် ထိုင်းဒဏ္ဍာရီထဲက မိကျောင်းမုဆိုး Krai
Thong ရဲ့ စတိုင်အပြုအမူ အတိုင်းတိရိစ္ဆာန်ရုံရဲ့ အကောင်အကြီးဆုံးမိကျောင်းရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ခေါင်း
ထည့် ပြသတဲ့ ပြကွက်လည်းပါဝင်ပါတယ်...
ကစားလို့ မ၀သေးဖူး....လာခဲ့ ဦး...
Playtime's not over yet! Somphop wrestles with the crocodile
အဲဒီပြပွဲမှာသွားရောက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ တဲ့Bronek ကတော့ အဲဒီမိကျောင်း
တွေဟာ တစ်ချိန်လုံး ငိုက်မျည်းနေတဲ့ အကောင်တွေမဟုတ်ဘူး...လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ သွားလာ
နေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ပါတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
မိကျောင်းတွေဟာ ၀ါးလုံးတုတ်တွေကို ကိုက်ဖြတ်ကြပြီး အလမ္ပါယ်ပြသူတွေက စိတ်ညှုိ့ သလိုလုပ်
လိုက်ပြီး မိကျောင်းပါးစပ်ထဲကို သူတို့ ရဲ့ ခေါင်းတွေကို ထည့် ပြကြတော့ တာပါပဲ...
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အလား မိကျောင်းကိုတောင် လေထဲမြှောက်ပြီး ပြန်ဖမ်းပြလိုက်သေးတယ်....
Smile for the camera: Another wrestler gripsasurprisingly docile beast and hoists him into the air
သူဟာ ( အလမ္ပါယ်ပြသူ) ဟာ မိကျောင်းပါးစပ်ထဲမှာအချိန်အတန်ကြာအောင် သူ့ နဲ့ လက်တွေ
နဲ့ ပခုံးအထိရောက်အောင် ခေါင်းထိုးပြီးတော့ ကိုနေပြတာဖြစ်ပါတယ့် ...
အဲဒီနောက်တော့ မိကျောင်းဟာ တစ်ကယ့် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပြန်ဖြစ်သွားတာပါပဲ...
တစ်ကယ့်ကို အံ့ သြစရာကောင်းတဲ့ ပြကွက်ပါပဲ....
အစကတော့ သူတို့ ဒီလို အသည်းယားစရာပြကွက်မျိူး လုပ်လိမ့် မယ်လို့ မထင်လို့ တစ်ကယ်လည်း
လုပ်ပြလိုက်ရော...တစ်ကယ့် ကိုအံ့ အားသင့် သွားတာပါပဲ....” လို့ အဆိုပါ ဓါတ်ပုံဆရာကပြောပြ
အဲဒီတိရိစ္ဆာန်ရုံဟာ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းလည်းဖြစ်ပြီး မိကျောင်းကောင်ရေပေါင်း ၁ သောင်း
Posted by Unknown | at 11:37 AM |0comments
Indian politician want criminals to join his party
သူခိုးကြမ်းပိုးများ အလိုရှိသည်...ရာထူးကောင်းကောင်းပေးမည့် ပါတီ...
လူလိမ်၊လူညာ၊ လူဆိုး၊ကြမ်းပိုးများဟာ သူတို့ ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုက ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတယ်၊
မရိုးမသားကြံစည်ပြောဆိုပြုမူတယ်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ ထိုသို့ သော စရိုက်တွေဟာ
လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့( နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ဖို့) ပြီးပြည့် စုံတဲ့ အချက်
အလက်တွေပဲဖြစ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟာ လူလိမ်၊လူကောက်၊လူ
ညစ်များကို သူ့ ရဲ့ ပါတီမှာဝင်ရောက် လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ ပါတီဝင်များကို စု
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဗဟိုအစိုးရဲ့ ယခင်မီးရထားဝန်ကြီး Lalu Prasad Yadav ဟာ သူဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်
လိုက်တဲ့ပြည်သူ့ အမျိူးသားပါတီ မှာ လူဆိုးသူခိုး၊ လူလိမ်လူညာအစွမ်းအစ ရှိသူများကို လာရောက်
ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ရာထူးတွေလာယူနိုင်ပါတယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်ဆွဲဆောင်ခဲ့ ပါတယ်...
လိမ်နိုင်ရင်သမာဓိ၊ ညာနိုင်ရင်ပညာရှိ၊ အမှန်ကိုပြောတဲ့ ဝန်ကြီးဟောင်း....
” တစ်ကယ်တော့ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးအတွက် အကောင်းဆုံး၊ အသင့် တော်ဆုံးသူရွေးချယ်ဖို့ အကောင်း
ဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ.... သင့် ရဲ့ ထောင်မင်းသားစွမ်းရည်ကိုသာ ပြောပြပြီး ကျွန်တော့် ပါတီကိုသာ ပါ
၀င်ပူးပေါင်းလိုက်ပါ...” လို့ဝန်ကြီးဟောင်း Yadav ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
” နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အများစုဆိုတာ လူလိမ်လူညာအဖြစ်နဲ့ သာ အဆုံးသတ်သွားကြရစမြဲဖြစ်လို့ 
အစကတည်းက ဒီလိုလူတွေ ( ရာဇ၀င်ရှိတဲ့ ၊ ဇ ရှိတဲ့လူလိမ်၊လူညာ ) နဲ့ စလိုက်တာပိုကောင်းပါ
တယ်....” လို့ သူကထပ်ပြီးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ကယ့် အများပြည်သူကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိနေသလို...
ရာထူးရာခံလေးရ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် လေးများရကြပြီဆိုယင် ...
မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုပေးခဲ့ တဲ့ ကတိတွေကို လှည့် လိုတောင်မကြည့် ၊ သတိမရကြတော့ 
အမှန်ကိုပြောပြီးစည်းရုံးတဲ့ ဝန်ကြီးဟောင်းကိုတော့ လေးစားမိပါရဲ့ ....
An Indian politician is recruiting crooks to join his party because he thinks their cunning, dishonesty and selfishness make them perfect for life as an MP.Former railways minister Lalu Prasad Yadav, 62, has launched an appeal for old lags to take office in his National People's Party."It's the best way to select candidates for politics. Show me your jail stint and join me," said Yadav.
"Most politicians end up crooked so they might as well start that way," he added.
Posted by Unknown | at 11:06 AM | 1 comments
တစ်ကိုယ်လုံးဘာအ၀တ်အစားမှမ၀တ်ပဲ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ လျှောက်သွားလေ့ ရှိတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား
Stephen Gough ဟာ အကယ်၍ သူ့ အနေနဲ့ အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်ပြီး
သွားလာနေထိုင်ဖို့ ဆက်လက်ငြင်းဆန်နေမယ်ဆိုလျှင် တစ်သက်လုံးထောင်ထဲမှာပဲ နေရလိမ့် မယ်
လွန်ခဲ့ တဲ့၂၀၀၃ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့Land's End ကနေ John O'Groats အထိ အ၀တ်ဗ
လာ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ လို့ နာမည်စကြီးခဲ့ တဲ့ယခင်တော်ဝင်ရေတပ်သားဟောင်း
ဖြစ်ခဲ့ သူဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၇ နှစ်တာကလုံးနီးပါးဟာ အခုလိုပဲ ကိုယ်ဗလာကျင်းပြီး လျှောက်သွားခဲ့ မှု
နဲ့ ထောင်ထဲမှာပဲ နေခဲ့ ရတာပါ...
မနေ့ ကတော့ အ၀တ်အစားမပါပဲ အများအမြင်မတင့် တယ်စွာသွားလာမှုနဲ့ ထောင်ဒါဏ် ၁၂ လ
ကျခံအပြီး ထောင်ထဲကထွက်လာခဲ့ ရာမှာလည်း အ၀တ်အစားတစ်ခုမှ မ၀တ်ပဲ ကိုယ်လုံးတီး ထွက်
လာခဲ့ လို့ ထပ်မံပြီး အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ ရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာပါ...
အခုလို့ မျိူးထပ်မံပြီးလျှောက်သွားတိုင်းလည်း ထောင်အကြိမ်ကြိမ် ကျခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ သူ့ ကို တ
သူ့ ရဲ့ အမှုကို သူကိုယ်တိုင်တရားရုံးမှာ အ၀တ်အစားလုံးဝမ၀တ်ပဲ လျှောက်လဲခဲ့ တဲ့အသက် ၅၀
အရွယ်ရှိ လူ့ ငကြောင် Mr Gouhg ဟာ အ၀တ်အစားဝတ်ယင် အပြစ်ကနေ လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ 
ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင် ငြင်းဆန်ခဲ့ ပါတယ်...
အရှက်ကြောနဲ့ ချက်ကြော မှားပြီးဖြတ်ခဲ့ လေသလား...
တရားသူကြီးမ Lindsay Foulis က Gouhg အနေနဲ့ အ၀တ်အစားဝတ်ပါ့ မယ်လို့ သဘောတူ
ခဲ့ ယင် သူမအနေနဲ့ သူ့ ကို Hampshire နယ်က Eastleigh အရပ် ကအိမ်ကိုပြန်ခွင့် ပေးမယ်လို့ 
ဒါပေမယ့် ယခင်က လော်ရီကားလည်းမောင်းခဲ့ ဘူးတဲ့Gough က သဘောမတူပဲငြင်းဆန်ခဲ့ လို့ 
အချူပ်ထဲမှာပဲ ဆက်ပြီးနေခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေ စစ်ဆေးပြီးရုံးတော်ကိုတင်ပြဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့ ပြီး
တရားသူကြီးမ က ” သင့် အနေနဲ့ လွတ်မြောက်ရမယ့် နေ့ ကိုရောက်လာပြီး အခုလိုပဲ ထပ်ပြုမူ
ယင်တော့ ထပ်ပြီးအဖမ်းခံရကာ တရားစွဲခံရပြီးထောင်ထပ်ကျဦးမှာဖြစ်တယ်..” လို့ ပြောကြားခဲ့ 
Gough က သူ့ အနေနဲ့ ထောင်ထဲမှာသာ တစ်သက်လုံးနေရမယ်ဆိုလည်း နေနိုင်ပါတယ်လို့ ဆို
ပြီး အခုလို ( အ၀တ်မပါပဲ နေထိုင်သွားလာတာဟာ ) လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ပဲဖြစ်
တယ် လို့ လည်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဟာ Edinburgh ကိုသွားတဲ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှာ အ၀တ်အစား
တွေချွတ်ပြီး ကိုယ်ဗလာနဲ့ နေခဲ့ ကတည်းကစပြီး စကော့ တလန် က ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ ရတာ လွန်
ခဲ့ တဲ့ ၇ နှစ်လုံးနီးပါးပါပဲ...
အဲဒီကစပြီး သူဟာ တရားရုံးရဲ့ တရားခွင်တွေမှာလည်း ထောင်ဝတ်စုံ ဒါမှမဟုတ် သာမာန်အ၀တ်အ
စားကိုတောင်ဝတ်ဆင်ပြီး ရုံးတော်ကိုတက်ရောက်အစစ်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ လို့ တရားရုံးတော်ကို မထေ
မဲ့ မြင်ပြုမှုတွေနဲ့ထောင်ဒါဏ်တွေထပ်တိုး၊ ထပ်ကျခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို အ၀တ်အစားမ၀တ်ပဲ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်..
ခရီးတစ်လျှောက် သူဟာ ၁၅ကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ ရပြီး၊ အချူပ်တွေထဲမှာ ညပေါင်း ၁၄၀ လောက်နေခဲ့ ရ
ပါတယ်...သူအချူပ်ကျခဲ့ တာကတော့ အခုလို အ၀တ်အစားမ၀တ်ပဲ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ အများပြည်သူ
မြင်ကွင်းမှာ နေထိုင်သွားလာတာကို အင်္ဂလန်နဲ့ ဝေလ နယ်တွေထက် ပိုမိုတင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်း
တွေနဲ့ ထိန်းချူပ်တဲ့ စကော့ တလန်နယ်မှာ ပိုပြီး အဖမ်းခံခဲ့ ရတာပါ...
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ ဒါမျိူးလက်မခံပါ...
စိတ်တူသဘောတူ ...တိရိစ္ဆာန်နဲ့ တူတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး...
Stephen Gough on his naked ramble from Land's End to John O'Groats with his then girlfriend Melanie Roberts
နောက်သုံးနှစ်အကြာမှာတော့ အဲဒီတုံးက သူ့ ရဲ့ အတူနေရည်းစားဖြစ်သူ Melanie Roberts နဲ့နှစ်
ယောက်အတူတိရိစ္ဆာန်များလို့ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ လျှောက်သွားခဲ့ ကြပါသေးတယ်တဲ့ ...
( မသူတော်ချင်းချင်း၊ သီတင်းလွေ့ လွေ့ ပေါင်းဖော်မွေ့ တယ်ဆိုတာ ဒါမျိူးဖြစ်မယ်ထင်တယ်...)
လူ့ လောကမှာနေယင်တော့ လူမှုထုံးစံတွေကိုလေးစာလိုက်နာရမှာ ဓမ္မတာပါ...
အဲဒီလိုမလိုက်နာနိုင်ပဲ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ယင်တော့ လူတွေနဲ့ ရောမနေ
ပဲ သီးခြားနေရပါလိမ့် မယ်...
The naked rambler, Stephen Gough, has been told he will spend the rest of his life behind bars if he continues refusing to wear clothes in public. The former Royal Marine, who became notorious for his naked hike from Land's End to John O'Groats in 2003, has spent much of the past seven years in prison for repeatedly appearing nude in public.He was yesterday found guilty of breaching the peace when he walked naked from Perth prison in December after finishinga12 month sentence for the same offence. Mr Gough was warned he will continue to be jailed every time he steps out of prison without any clothes on.The 50-year-old, who conducted his own defence while appearing in court completely naked, turned down an offer to walk free yesterday on the condition that he got dressed.Sheriff Lindsay Foulis told Gough she would consider granting him bail to go home to his "warmer" house in Eastleigh, Hampshire, if he agreed to put some clothes on. The former lorry driver refused the offer and was remanded in custody.Ordering psychological and psychiatric reports, the Sheriff said: "When the day comes for you to be released, you will be apprehended and the same process gone through again.” Mr Gough said he accepted he could "potentially" remain in jail forever and added: "This is about individual freedom."
The father of two has spent most of the past seven years in Scottish jails after stripping off onaflight to Edinburgh. Since then he has declined to wear prison uniform or to appear clothed in court, resulting in further custodial sentences for contempt. Mr Gough completed his first naked ramble across Britain in 2003. He was arrested 15 times during the journey and spent 140 nights in jail, mainly in Scotland where the authorities takeastricter approach to public nudity than in England and Wales. He finished his second hike with his then girlfriend Melanie Roberts three years later.
Posted by Unknown | at 4:20 AM |3comments
အသက် ၁၅နှစ်နဲ့အရပ် ၆ ပေ ၁၁ လက်မ မြင့် သူကျောင်းသ...
Colombian farmer castrates himself to avoid cheati...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့ မှ မဟာမြိုင်ဆ၇ာတော်ဦ...
Vietnam Gem Mine Owner Aims to Carve World's Bigge...
Man offers his tongue to gods
ကမ္ဘာ့ ကြောက်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးရေအိုင...
The schoolgirl who 'cries' blood and bleeds throug...
Indonesian football fan invades pitch and tries t...
သေကံမရောက်၊ သက်မပျောက်သည့် ကလေး...
Cat 'stationmaster' gets promoted to executive pos...
ဒူဘိုင်းက ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦးဖွင့် ပွဲကျင်...
ကိုယ်မွေးတဲ့ မျောက် ကိုယ့် ပြန်ချောက်....
China's 245mph train service is the world's fastes...